Seenaa Oromoo Maalitu Adda Goddha? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSeenaa Oromoo Maalitu Adda Goddha?
Damee Boruu tin: Guraandhala 10, 2019
Qabsoon biyya lafaa irratti gabroofattuu fi uummata garbomee jiddutti godhamee fi godhamaa jiru keessatti ayyaan ilaalatoonni gahaa guddaa qabu. Dantaa uummata isaanii gananii kan konoleefattuu tiksu. Gochaa isaanii kanaaf kan garaa isaanii itti guutatan harca’aa funaanchuu male bu’aa garbiraa hin qaban.
Seenaa Uummata Oromoo keessatti kan argaa jirru ayyaan ilaalatoota adda (unique opportunists) tahan arguu dha. Namoota diina Oromoofu Hooggana tahuu danda’utu diinaaf jilbeefatee hojjeta. Qabsoo keenya keessatti warra bilisummaaf wareegame faarsuu caalaa warra akka sabni garboomu godhe abaaruun yaroo keenya guddaa fudhachaa jira. Oromoo wal ga’ee ka’ee utuu Goobanaa Daaccee hin abaariin guyyaan gargar bahu jira natti hin fakkaatu.
Goobanaan nama jabaa uummata Oromoo irraa diina qolachuu danda’u ture. Uummata isaa mo’ee Mootii tahuu dhiisee harka isaan uummata isaa cabsee akka Ormi irratti Mootii tahu maaliif akka godhe namaaf hin galu. Kanaafuu maqaan isaa Uummata Oromoo biratti ulee abaarsa tahee hafaa jira.
Mee har’a kan tahaa jiru haa ilaallu. Qaree fi Qeerroon Oromoo qabsoo fincilaa garbummaa fininsanii dhiiga isaanii akka lolaa gannaa dhangalaasanii waraana Wayyaanee harka qullaa Oromiyaa irraa buqqisuu danda’anii turan. Haa tahu malee Qaroon ilmaan Oromooti ofiin jedhan qabsoo kana ija keenya duratti harkaa butanii kana isaanii godhachaa jiru. Kan isaanii godhachuun rakkina qabu utuu uuammata isaanii wajjin dhaabbatanii.
Hoogantoota OPDO haaraa kana kan isaan mararaa jiru akka Goobanaa Daaccee hammeenya Miniliki raawwataa tahuun baayyee kan nama gadisiisuu fi nama boosisu dha. Maal taha yoo Mootii Oromoo tahan? “Yaa Uummata yaroo nuuf kenaa isa balleessine hin qajeelchina” jechaa waraana Wayyaanee Oromiyaa irra deebisanii qubsiisanii uumata keenya akka haaluu ykn ijaa bahu gochaa jiru. Manaa fi midhaan maasii irratti gubaa akka uummatni keenya beelaaf saaxilamu gochuun itti fufee jira. Qabeenya uummata saamuu, nama hidhuu fi ajjeessuun hojii isaanii isa duraa ti. Warra hidhamuu fi ajjeessamu kana keessa poolisooti Oromiyaa akka jiran ragaan jira.
Utuu haalli suukaneessan kun uummata keenya irratti guyyaa fi halkan raawwatamaa jiru ayyaan ilaalatoota bilisoomane jedhanii hojii OPDO dhugaa fakkeessuu uummata burjaajessaa jiru. Waraanni deemaa jiru ABO fi ODP jidduu fakkeesanii warri uummata afaanfajeessuu yaalan ifatti aggarra. Waraanni deemaa jiru akkuma kaleessa waraana Wayyaanee fi Uummata Oromoo jidduu dha.
ODPn waraana mataa ishee hin qabdu. Waraanni Wayyaanee uummata Oromoo miti Poolisii Oromiyaa hidhuu fi ajjeessuu akka ishee irraa ajaja hin fudhane agarsiisa. Waan haaraan yoo jiraate Milishaa Amaaraa fi Ginbit 7 ufata RIB ittii uwiisanii uummata keenya Wallgaa ficisiisaa jiraachuu isaanii ti.
Kononel Abiyi Uummata Oromoo miliyoonan qe’ee isaanii irraa buqa’anii beelaa fi jireenya gadadoo keessa jiran gargaaruu irra Mootota Habashaaf Oromiyaa keessatti dagaa yaadannoo dhaabuu dursaa jira. Mootonni Habshaa warra Uummata Oromoo saamaa fi cunqursaa ture uummatni keenya kabajaa tokko hin qabuuf. Inni garuu waan tuffii Uummata Oromoof qabu agarsiisuuf hojiiisa duraa gochaa jira. Kan caalu Uuummata Oromoo mana wajjin gubsiisu, hidhuu fi ajjeesiisu, shamaran akka gudeedaman gochuun uumata keenya karaa qabatamaa taheen adabaa jira.
Ilmaan nafxanyoota warra isa gorsan masaraa minilkii itti naqee uummata keenya Finfinnee keessaa ariisisuuf deema. Daballoonni OPDO afuura haaran uummatatti bahaa jiru. Namni lama yaroo dubbatan daga’eera.Waan jedhan keessa ,” Waan guddaa Oromoof hojjechaa jirra. Garuu dubbachu hin dandeenyu. Yoo dubbanne warra dalanuttu jira. Nyaaran wal haa dubbifnu. Har’a biyyi Itoopiyyaa, Gaafni Afrikaa fi Afrikaan haraka keenya galee jira. Kanaafuu gaaffii tokko malee akka nu gargaartan barbaanna”jedhu. Ilmaan Sareen jaama dhaltanii erga ija banatanii argaa jiraatu. Haatii Oromoo argaa dheessI. Garuu warra garaa isaaniif jiraatan jaamanii akka jaaman yaroo darban argaa jirra. Nama garaa isaaf jiraatuuf malee waan OPDOn afuuftu dhugaa hin qabu. “Nama dhugaaf hin dubanneef imli dhugaan hin dhalatiin” jedha Oromoon.
OPDO yaroo hundaa jaalaltu rakkisa. Jaalalli TPLF irraa ishee qabatee ture waan qabanaa’aa jiru fakkaata. TPLF irraas dalansuun ni mul’ata. OPDO bara kana jaalalli muddaan nafxanyoota wajjiin ishee qabatee rakkisaa jira. Walitti marmanii sirbaa jiru. OPDO keessa duruu ilmaan nafxanyaa afaan Oromoo waan dubbatanii keessa galan akka jiran hedduu dubbatama. Bara kana OPDO keessa galee kan Oromoota hidduu fi dararaa jiru miseensota Ginbot 7 akka tahe odeefamaa jira.
Uummatni Oromoo qabsoo hadhooftu godhee OPDO of irraa kaasu qaba. Bushaa OPDO jalatti Uummatni Oromoo bara baraan akka qaana’e jiraachuun ni gaha. Hammeenyi Boorana, Gujii ,Wallagaa fi Illu Abaa Boraa irratti raawatamaa jiru booru Oromiyaa guutuu akka qaqqabu dagachuu hin qabnu. Sabaa fi sablammii Impaayera Itoopiyaa keessa jiranis ayyaana biraa hin qaban. Kanaafuu harka wal qabanee irree tokkoon diina nutti deemaa jiru kana of irraa cabsuu qabna.
Walcabsuun, abaaruun, qeequun eessanu nu hin gahuu. Har’a uummata keenya kan cabsa jiru warroota beektoota ofiin jedhan natti fakkaata. Maaluma yoo tokko tahani hojjetan. Kan addaan nuu qoodan. Eenyuu deeggarra silaa isaanu hedduu. Oromoo meeqatu jira? Kan isaan bakka 5,10tti wal kutan. Yoo siyaasa tokkoo, gaaddisa tokko , afaan tokko jalatti walgeenye ni moona. Ykn gabrummaan kan darbe osoo hin taane kan hafeetu caala. Furmaanni warri siyaasa afarsan yoo tokko tahan qofaadha. Isinis seenaa dhugaa barreessa akka dhalootaf tolutti.